Chelmo - O သွေးပိုင်ရှင်လေးတွေရဲ့ အကြောင်း
O သွေးပိုင်ရှင်လေးတွေရဲ့ အကြောင်း
O သွေးလေးတွေနဲ့ ပတ်သတ်သမျှကို ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်။
O သွေးအများဆုံးရှိတဲ့ နိုင်ငံ >>> America, Kenya, Nigeria.
O သွေးတွေရဲ့ကောင်းတဲ့ အချက် >>> ဖော် ရွေတတ်တယ်၊ ဘာသာရေးကိုင်းရှုိင်းတယ်၊ ကိစ္ခ္စ သေးသေးလေးတွေက အစ တန်ဖိုးထားတယ်။
O သွေးတွေရဲ့ မကောင်းတဲ့ အချက် >>> ပေကတ်ကတ်လုပ်တတ်၊ ပေါ့လျော့တတ်၊ တစ်ခါတစ်ရံ troublemaker လေးတွေဖြစ်တတ်။
O သွေးလေးတွေရဲ့ထူးခြားတဲ့ အချက်လေးတွေက...................?
O သွေးလေးတွေက တော်ရုံတန်ရုံ စိတ်ဆိုးဒေါသဖြစ်ခဲပြီး ဒေါသထွက်ရင်လည်း သူများနဲ့ မတူတတ်ပါဘူး။ သူတို့က စည်းစနစ်ကြီးတဲ့ သူတွေနဲ့ ပေါင်းသင်းရတာကို မကြိုက်ဘဲ လွတ်လပ်မှုကို တန်ဖိုးထားမြတ်နိုးတတ်သူလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ အားလပ်ရက်မှာ အိမ်မှာ အချိန်ဖြုန်းရတာကိုသာ နှစ်သက်ကြသူလေးတွေပါတဲ့။ အချစ်ရေးမှာ ချစ်သူနဲ့ ရေရှည်လက်တွဲလေ့ရှိပြီး တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ ချစ်သူအပေါ် ခံစားချက်မပါသလို သူစိမ်းဆန်တတ်ကြပါတယ်။
O သွေးနဲ့ တစ်ခြားသွေးလေးတွေရဲ့လိုက်ဖက်ညီမှု
O & A ............... A သွေးနဲ့ O သွေးလေးတွေရဲ့ စရိုက်လေးတွေကတော်တော်လေး ကွာခြားပေမဲ့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ဆွဲဆောင်မှု ရှိကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ တစ်ယောက်ရဲ့အပြုအမူက တစ်ယောက်အတွက် စိတ်ပျက်စရာအမူအရာမျိုး ဖြစ်တတ်ပြန်ရောတဲ့။
O & B.................O သွေးနဲ့ B သွေးအတွဲလေးတွေကတော့ ရေရှည်လက်တွဲ နိုင်တဲ့အထိ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်နားလည်မှုရှိကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။
O & O.................O သွေးချင်းတွဲမယ်ဆိုရင်တော့ အစပိုင်းမှာ အဆင်ပြေသယောင်ရှိနိုင်ပေမဲ့ ကြာလာရင်တော့ တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက် အေးစက်စက်နိုင်တတ်တာတွေကြောင့် မကြာခဏ စကားများရန်ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ ရေရှည်လက်တွဲချင်ရင်တော့ တစ်ဖက်သတ်အမြင်တွေနဲ့ မပြောဆိုကြပဲ တစ်ခြားတစ်ယောက်အမြင်ကို တစ်ခြားတစ်ယောက်က respect ထားသင့်ပါတယ်တဲ့။
O & AB...............AB သွေးလေးတွေက နားလည်ရခက်သူလေးတွေဖြစ်ပြီး အချိန်ယူတတ်တာကြောင့် O သွေးပိုင်ရှင်လေးအနေနဲ့ ငြီးငွေ့လာတတ်သလို ရေရှည်တော့ မမြဲတတ်ကြပါဘူးတဲ့။